Dr. S- THETIC Facial & Dental Aesthetic Center | Beauty MM
Dr. S- THETIC Facial & …
Dr. S- THETIC Facial & Dental Aesthetic Center
Be the Change You Always Want To See
သင်အမြဲစိတ်ကူးခဲ့ရသော လှပကျော့ရှင်းသည့် ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ချိန်တန်နေပြီဟုသင်တွေးနေပြီ ဆိုရင်တော့ Dr. S-THETIC ဆီသို့ ကြွလှမ်းခဲ့ပါ…..
Open Hours : 09:00 – 21:00
09 44148 0002
No.972, Yadanar Road, Near Junction of 14th/15th Street, 5th Floor, Shine Tower, South Oakkala Township, Yangon
📄(10 March to 10 April)📄
:-* Hi. Everyone! :-*
💦သင်္ကြန်​မှာ အလန်းစားဝတ်​ပီး 👗ကဲကြမယ့်​ မမလှလှ၀၀ ​တွေ🙍နဲ့ အ၀​တွေလွန်​ပီး ဘာဝတ်​၀တ်​မလှဘူး 👎ဒါ​ကြောင့်​ သင်္ကြန်​ မှာ အပြင်​​တောင်​ထွက်​မလည်​​တော့ဘူးလို့စိတ်ဓာတ်ကျ​​​နေတဲ့😔 ပျို​ပျို​တွေ👩 ကိုကို​တွေ 👱ရှိလား.?
​😌အရင်​တုန်းက​တော့ စားချင်​တာ​တွေစား 🍞🍟🍜အ၀လွန်​အဆီ​​တွေပိုခဲ့တဲ့ အသား​ရေ 😔က အခု အစား​လျော့စားပီး Lose Weight ​တော့ ပြန်​လုပ်​​နေပါရဲ့ 😤😒ဒါ​ပေမယ့်​ဗိုက်​​ခေါက်၊​လက်​​မောင်း၊ ​​ပေါင်​​၊ခြေသလုံး​တွေက အသား​ရေ​တွေ က ​လျော့ရဲတွဲကျပီး ကျန်​​နေခဲ့လို့ မလှ​တော့ဘူးလား😥😪
😞😔ဗိုက်​​တွေ တအားပူ​နေလို့ အလုပ်သွားရင်👔👖 ​​​Gentleman Shirt​👔👖တောင်​ ၀တ်​မရဘူးဆိုတဲ့ Uncle ​တွေ ​ရောရှိလား👎👎
😓ဗိုက်​​ခေါက်​ထူထူ​ကြီး​တွေ ထွက်​လာလို့ လက်​​မောင်းကြီး​💪တွေ ကြီးပီး အဆီ​တွေ တတ်​​နေလို့ မြန်​မာဆန်​ဆန်​ ရင်​ဖုံး​အကျီဝတ်ရင်​တာင် ​💃Body Shape ​မ​ပေါ်​တော့လို့ စိတ်​ညစ်​​နေတဲ့ ​Aunty ​လေး​တွေ​ရော ရှိကြလား…🙍
✨ဘာမှ စိတ်​ညစ်​ မခံ​နေနဲ့​တော့ကွာ ✨😘..Dr.S-Thetic Clinic က ဒီ Problem ​တွေ အကုန်​လုံးကို ​​ဖြေရှင်း​ပေး​မယ်​ကွာ..😍😍
ခွဲစိတ်​ဖို့ ✂မလို ❌
ဆေးထိုးဖို့ 💉မလို❌ ​
ဆေး​သောက်​ဖို့💊 မလိုဘဲ ❌နဲ့
Viora V30 စက်​​လေး အသုံးပြုပီး
V Form(Body Contouring) လုပ်​လိုက်​၇ုံ နဲ့ တင်​ ဒီ ပြသနာ​တွေ ​ဖြေရှင်းနိုင်​ပီ​နော်​✅
❤ချစ်​တို့ရဲ့ လက်​​မောင်း၊၀မ်းဗိုက်​၊​ပေါင်​၊​ခြေသလုံး ​တွေမှာ ရှိတဲ့ အဆီ ပို​တွေ ကို ​အချိန်တို အတွင်း​ချေဖျတ်​​ပေးပီးလျော့ရဲတွဲကျ​နေတဲ့ အသား​ရေ​တွေက အစ ပြန်လည်​တင်းရင်းလာ​စေနိုင်​ပါတယ်​ရှင့်​❤
❤ချစ်​တို့အတွက်​ သင်္ကြန်​အထူးpromotion ​လေးက​တော့
🌹20%Discount + 🌹7 in 1 treatment 3times🌹
📋March 10 to April10 📋
♥ မင်္ဂလာပါ ချစ်​တို့​ရေ ♥
💦 မြန်​မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်​ 💦 နှစ်​သစ်​ကူးပွဲ​တော်​ကြီး နီးလာကြပီဆို​တော့ 😀😀သင်္ကြန်​မှာ ချစ်​ချစ်​ တို့နဲ့👫👫 အလှဆုံး ကဲဖို့အတွက်​ပြင်ဆ​င်​​နေကြပီ ဟုတ်​ ✌ ✌ :-*
💦သင်္ကြန်​ ကဲ ဖို့ ပြင်​ဆင်​တာ​တာ့ဟုတ်ပါပီ ​💦
ချစ်တို့ အ​ရေးကြီးဆုံးအချက်​ကို ​မေ့​နေကြမှာစိုးလို့သတိ​ပေးချင်​လို့ပါရှင့်​😯 သိကြရဲ့လား: ဘာလဲ ဆို​တာ?👀
​💦သင်္ကြန်​မှာ ရေစိုရင်​ လှပ​နေ​အောင်​ အဓိက ​ရေစိုမိတ်ကပ်​​​​💅💄 ​တွေ လိမ်းကြရမှာ​ပေါ့ ..ကိုယ့်​ပင်​ကိုယ်​ အသား​ရေ မ​ကောင်းရင်​ မိတ်​ကပ်​​အ​ကောင်းစား​တွေ လူး​နေလဲ အလကားပဲ​ပေါ့ကွယ်​ ​👎👎✖ပီး​တော့ မိတ်​ကပ်​ ကြီး​တွေ ထူပီး ကွက်​​နေမယ်​ ​​နေပူထဲ ​ရေ​ဆော့မယ်​ဆို အသား​ရေ​တွေ ​နေ​လောင်​မယ်​😞 ပျက်​စီးမယ်​😔 ချစ်​ချစ်​​တွေနဲ့တူတူ​ဆော့မယ့်​ သူ​တွေဆို အလှပ​တေပျက်​ရှက်​စ၇ာကြီး​တွေ ဖစ်​ကုန်​ရင်​ အခက်​သား 😱😭😭
ဒီ​တော့ချစ်​ချစ်​ နဲ့ တူတူ ကဲမယ့်​ ပျိုပျို ​တွေ​ရော 👭👭ကိုကို​ရော အတွက်​👬👬 အ​ကောင်းဆုံး ကြိုတင်​ ကာကွယ်​ ကုသ မှူ​လေး​ပြောပြမယ်​ကွယ်​💞💞
📜Dr.S-Thetic Clinic ရဲ့Skin treatment အ​ကောင်း​ဆုံးထဲက တခု အ​ကြောင်းရှင်းပြ​ပေးမယ်​​​နော်​📜
🌹7 in 1 Skin Treatment🌹
(Facebook​ပေါ်မှာ ​ခေတ်​စား​နေတဲ့ ​နေေ၇ာင်​ထဲမှာ Glow ကြမယ်​​လေ)
🌹#Dead_Cell​တွေကို ဖယ်​ရှား​ပေးပီး အသား​ရေကို​ချော့​မွေ့​စေခြင်း၊
🌹#မျက်​နှာ​ပေါ်ရှိ အဆီကျိတ်​​တွေ ​ပျောက်​ကင်းသက်​သာ​​စေခြင်း၊
🌹#ချွေး​ပေါက်​ကျယ်​ခြင်း အမဲစက်​ အမဲကွက်​များ​ပျောက်​ကင်းသက်​သာ​စေခြင်း၊
😱Wow 😱😍😍Treatment တကြိမ်​ တည်းလုပ်​ရုံနဲ့🌹(၇)ချက်​လုံး🌹 ပြုပြင်​လို့ရတယ်​ဆို​တော့ မြန်​မြန်​​လေး ဘိုကင်​ တင်​ထားလိုက်​​တော့​နော်​ ချစ်​တို့​ရေ😘😘
❤အချစ်​မရှိ​သေးတဲ့ ပျိုပျို​တွေ👩👩ကိုကို​တွေလဲ 👱👱အချစ်​စစ်​​လေး သင်္ကြန်​မှာရှာကြဖို့ အတွက်​ 💞💞 Dr.S-Thetic. Clinic မှာ မြန်​မြန်​ လာပီး treatment ​လေးလာလုပ်​လိုက်​ကြ​တော့​နော်​💞💞
💲💲Promotion ​လေးက ​တော့ 💲💲
🌹5times => 1time Gift +50,000 Save🌹
🌹10times =>2times Gift + 100,000 Save🌹
• မျက်နှာတပြင်လုံး တင်းရင်းလှပအောင် ပင့်တင်ပေးခြင်း
• နှဖူးပေါ်ရှိ အရေးကြောင်းများ
• မျက်လုံးတစ်ဝိုက်ရှိ အရေးအကြောင်းများ
• Smile Line များ
• လည်ပင်းရှိ အရေးကြောင်းများ စသည်တို့ ကို ထိရောက်မြန်ဆန်စွာကုသပေးလျှက်ရှိသည်။
• ချိုင်းအောက်ရှိ အမွှေးအမျှင်များ
• ကျောပြင်၊ ဗိုက် နှင့် ရင်ဘက်ရှိ အမွှေးအမျှင်များ
• လက်မောင်း၊ ခြေတလုံးရှိ အမွှေးအမျှင်များ
• Bikini Line ရှိအမွှေးအမျှင်များနှင့် အခြားသော ခန္ဓာကိုယ်ရှိ မလိုလားအပ်သော အမွှေးအမျှင်များကို နာကျင်မှုကင်းစွာဖြင့် ဖယ်ရှားပေးနေပါသည်။
Achieve Your Dream – Body
• မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်ခြင်းကို ကုသပေးခြင်း
• လက်မောင်းရှိ အဆီပိုများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း
• ကျောပြင်ရှိ ကြည့်ရဆိုးသော အဆီပိုများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း
• တင်ပါးရှိ Celluite များကိုဖယ်ရှားပေးခြင်း
• သွယ်လျလှပသော ပေါင်တံနှင့် ခြေသလုံးဖြစ်အောင် ပုံဖော်ပေးခြင်း
• ၀က်ခြံအမာရွတ်နှင့် ချိုင့်ခွက်များ
• အကြောပြတ်ခြင်းတို့ ကိုလည်းထိရောက်စွာကုသပေးလျှက်ရှိနေပါသည်။
• မေးရိုးကြွက်သားသေးအောင် ဆေးထိုးပေးခြင်း
• မေးစေ့ချွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်း
• ဖူးငုံ လှပသော နှုတ်ခမ်းတစ်စုံ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးခြင်း
• ခြေသလုံး ကြွက်သားသေးအောင်ဆေးထိုးပေးခြင်း
• အသားအရေကို ပိုမိုဖြူဝင်း ကြည်လင်တောက်ပလာအောင် ဆေးသွင်းကုသပေးခြင်း
• ကြိုးထည့်နည်းပညာဖြင့် မျက်နှာအသားအရေ တင်းရင်းနုပျိုလာအောင်ပင့်တင်ပေးခြင်း (Threadlifting)
Dental Veneer ( မိမိရဲ့ ရှေ့သွား အသွင်အပြင်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲချင်သူများအတွက် သွားရှေ့ မျက်နှာပြင်တွင်
Diamond ( လေဆာ+ဆေးအသုံးပြုခြင်း သွားကိုစိန်ကပ် အလှဆင်ပေးခြင်း။)
Fissure Sealant ( ကလေးငယ်များရဲ့ ကြီးသွားတွေ သွားပိုးမစားအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု ပြုလုပ်ပေးခြင်း။)
Diastema Treatment ( ရှေ့ သွားလေးတွေ အနည်းငယ်ကျဲနေ၊ ပဲ့နေသူများအတွက် နာရီပိုင်းအတွင်း လေဆားနည်း
ပညာကို အသုံးပြုပြီး သွားဖာပေးခြင်း။)
Teeth Whitening ( သွားတွေကို Whitening နည်းပညာဖြင့် နာရီပိုင်းအတွင်း ပြုလုပ်ပေးခြင်း။)
Zirconia Crown ( သွားအစစ်နဲ့ခွဲခြားမရလောက်အောင် လှပမာကျောတဲ့ အကောင်းစားကြွေနဲ့ သွားစိုက်ပေးခြင်း။)
Orthodontic Treatment ( သွားမညီ၊ သွားထပ်နေသူများ၊ သွားညှိကုသမှုခံယူလိုသူများအတွက် ရွေချယ်စရာ (၄) မျိုး
Scaling and Tooth Polishing ( သွားမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးနဲ့အစွန်းအထင်းတွေကို သန့် စင်ဖယ်ရှားပေးခြင်း။)
ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ နာမည်ကြီး အတွေ့ အကြုံရင့် ဆရာဝန်ကြီးများ နှင့်အတူ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု အရေပြား နှင့် အလှအပဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်များ ကိုယ်တိုင် ဦးစီးဖွင့်လှစ်ထားသော SEOUL Aesthetic Clinic မှကြိုဆိုပါတယ်….
နှင်းစက်လေးတွေနဲ့အပြိုင် ကြည်လင်ရှင်းသန့်တဲ့ အသားအရေလေး ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ၊ Laser Care Clinicမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ် Treatment များနဲ့ ကြိုဆိုနေပါတယ်